Momba anay - Arenti & Laxihub
Arenti dia mpamorona sy mpamokatra vahaolana ho fiarovana ny filaminana IoT Smart Home, teraka tany Hoofddorp, Netherlands tamin'ny taona 2020; natsangan'ny injeniera avy amin'ireo orinasa mpiaro ny tany manerantany. Miaraka amin'ny orinasa mitazona, dia nanangona traikefa efa-taona tamin'ny R&D izahay sy ny famoronana fakantsary fakan-tsarimihetsika fiarovana an-trano hatramin'ny taona 2017. Tamin'ny taona 2020, ny fandefasana isan-taona dia nahatratra 3,8 tapitrisa unit.
Amin'ny maha mpanamboatra IoT azy, Arenti dia mifantoka amin'ny fampivoarana ireo haitao manify. Ny fakan-tsary Arenti dia misy fiasa mahery vaika Art Intelligence, toy ny AI Motion Detection, Sound Detection, Geo-Fencing Privacy Protection, Customizable Detection Zone, Super P2P, Gen. 2.0 Web-RTC, sns., Ny endri-javatra isaky ny fitaovana Arenti dia novolavolaina sy atolotra. tsy misy sarany fanampiny.
Hatrany am-piandohana voalohany nahaterahany, tapa-kevitra i Arenti ny hanome vokatra azo antoka momba ny fiarovana an-trano IoT ho an'ireo mpampiasa manana filàna samihafa manerantany. Any Arenti dia afaka mahita fakan-tsary miorina anaty trano, fakan-tsarimihetsika, fakantsary bala any ivelany, fakantsary tselatra, fakan-tsary misy bateria ary lakolosim-baravarana ambanin'ny marika roa ny olona any Arenti: Arenti ho an'ny tsena avo lenta ary Laxihub kosa ho safidy mora vidy kokoa.
Arenti dia mikendry ny ho iray amin'ireo mpamorona sy mpanamboatra tsara indrindra ny IoT Smart Home Security manerantany, mahay mamorona sy manavao hatrany ary manome ny mpampiasa erak'izao tontolo izao ny endrika faran'izay tsara indrindra amin'ny vokatra Arenti rehetra, ary manampy ny olona manana smater sy vahaolana mora kokoa ho an'ny filaminan'ny tena manokana sy ny trano. Tsy hiasa amin'ny famoriana fotsiny i Arenti, fa mitandrina tsara ny R&D, ary ho mpitondra manerantany amin'ny indostria.
Momba an'i LAXIHUB
Laxihub dia marika kely an'ny Teknolojia Arenti. Amin'ny maha mpanamboatra fanaraha-maso horonantsary an-trano vahaolana feno azy, i Laxihub dia mifantoka amin'ny fampandrosoana sy ny famokarana ny tsipika vokatra an-trano an-tsaina, mahomby ary sariaka. Ny vokatr'i Laxihub dia tarihan'ny teknolojia Arenti, ampiarahina amin'ny volavolan-kevitry ny ekipa mpamorona Arenti, Laxihub dia manome vokatra tsara sy mora ampiasaina ary lafo vidy amin'ny mpampiasa rehetra. Mandritra izany fotoana izany dia mijery tsara ny tsiambaratelon'ny mpampiasa sy ny traikefan'ny mpampiasa i Laxihub ary mampiasa ny haitao farany manaparitaka indrindra sy ireo mpanome tolotra tsara indrindra amin'ny famolavolana kojakoja vokatra sy serivisy rindrambaiko hiantohana ny tsiambaratelon'ny mpampiasa sy hiantohana ireo angona momba ny mpampiasa. Ao Laxihub, ny mpampiasa rehetra dia hiaina ny vokatra IoT tsara indrindra.
Ny orinasan'ny Arenti dia natsangana ary niditra tao amin'ny indostrian'ny IoT Smart Home Security tamin'ny 201701
Arenti dia natsangana tamin'ny tapany voalohan'ny taona 2020, naorina ny ivon-toeram-piasana ao amin'ny NL sy ny PRC02
Ny fakan-tsary voalohany fiarovana an-trano Arenti IN1 / Laxihub M4 nataon'i Arenti dia natomboka tamin'ny volana Jona 202003
Navoaka tamin'ny Desambra 2020 ny Andian-tsarimihetsika fakana sary an-tsarimihetsika Arenti 2K Aluminium Framed Optics Smart Home Security04
Nahazo ny Red Dot Design Award 2021 tamin'ny volana martsa 2021 ny Arenti Optics Series05
Nahazo ny iF Design Award 2021 ny Arenti Optics Series tamin'ny aprily 202106
Ny fakantsary Wi-Fi dual-band 2.4 GHz & 5 GHz voalohany - Laxihub MiniCam nataon'i Arenti dia natomboka tamin'ny aprily 202107
HAHITA, HENO, Hiresaka ary hikasihan-tanana
Miaraka amin'i Arenti, lasa mora kokoa ny filaminan'ny tena manokana sy ny an-trano.